Lo mcimbi osihloko sawo besithi Entrepreneurship Through the Arts, ubenendathane yezinhlelo zezinsuku ezine ngokuhlanganyela ne-Durban University of Technology (i-DUT) ne-British Council, wesekwe yi-UKZN.
ILekgotla ivulwe yiqembu elicula umculo wesiNtu nelishaya ingoma evuthayo laseSikoleni Sobuciko, Ikusasa Lethu,elicijwe wuDkt Patricia Opondo.
ILekgotla, obekungeyesithathu ngokuhlelwa wuMnyango wezeMfundo ePhakeme ngenhloso yokushintsha izinto ezithinta amabhizinisi kuwo wonke amanyuvesi aseNingizimu Afrika, ibihanjelwe yizicukuthwane ezinjengoNgqongqoshe weMfundo ePhakeme uDkt Blade Nzimande neMeya eBambile kaMasipala waseThekwini uNkk Fawzia Peer.
ILekgotla ibigcwele izinkulumo ezingezihloko ezehlukene ezithinta amanyuvesi nenselelo yawo yokuba ngamabhizinisi, nokukhuthaza abafundi ukuthi babe ngosomabhizinisi, ngokwezinhlelo nokwenza, ukuphathwa kwawo, izinto ezithinta ubunikazi bomqondo nezindawo zokufukamela osomabhizinisi.
Abafundisa e-UKZN abangoDk Thea van der Westhuizen noNks Malindi wakwa-Discipline of Management bahole izingxoxo ezithinta ezamabhizinisi, uhlelo lokufundisa, ezezinhlelo nokwenza nokufaka umqondo wezamabhizinisi kubafundi.
I-UKZN InQubate, ewuhlaka lwezinhlanu zoPhiko loCwaningo, isiza abafundi bafeze amaphupho abo ahlukile ukuthi abe ngamabhizinisi aphumelelayo ngokohlelo lwamakhono amabhizinisi olubizwa ngokuthi i-ENSPIRE. Lolu hlelo lunika abafundi ithuba lokuqala amabhizinisi besesenyuvesi. Iphini LeSekelashansela (lezoCwaningo) uSolwazi Deresh Ramjugernath lithe: ‘I-UKZN ihamba phambili kwezamabhizinisi abafundi ezweni ngokuba yinyuvesi yokuqala eNingizimu Afrika ukusungula inqubomgomo yezamabhizinisi abafundi ngokohlelo lwe-ENSPIRE ngaphansi kwe-InQubate.’
I-ENSPIRE ihlanganisa isigaba sokuthuthukisa ibhizinisi lapho abafundi beqeqeshwa khona ngokuthi ulwenza kanjani uhlelo lokuqala ibhizinisi, nesigaba sokuphatha ibhizinisi, bathi beqeqeshwa babe beqhuba ibhizinisi bexhaswe yi-UKZN.
‘Ngale kokuthuthukisa amabhizinisi abafundi nohlelo lwe-UKZN lokuba yinyuvesi yamabhizinisi, i-InQubate ihola uhlelo lokuthuthukiswa kwamabhizinisi abafundi elingungqaphambili ophikweni lwase-Westville kanti sihlela ukuthi kube sekuphelile ngowezi-2010,’ kusho uNks Suvina Singh, umQondisi we-InQubate e-UKZN.
Izinhlelo Zolwazi Lwendabuko (i-IKS) zase-UKZN, ezigxile ekulapheni ngemithi yesiNtu yase-Africa, ikhangise ngomsebenzi kaNkk Zandile Mbambo, owelapha ngamakhambi esiNtu nonenkampani ekhiqiza izinto zokwelapha ngesiNtu ezinezithako zemvelo. UNkk Mbambo uthi izinhlobo zezitshalo akufanele azisebenzise uzibona ‘ngesipho samaphupho nezibonakaliso’ bese enza imikhiqizo ngosizo lwe-IKS. ‘I-IKS ingisizile yangiqeqesha njengomelaphi wendabuko, yangisiza ngakwazi ukuqala ibhizinisi lami, ngakwazi ukuzimela njengosomabhizinisi,’ kusho yena.
Emikhiqizweni kaNkk Mbambo kukhona imithi yokugcoba eqeda “umzimba omubi”, imithi yokuqeda izinhlungu, imithi yokukhuculula isikhumba, imithi eyenza amagwebu yokugeza, imithi yokugcoba, amafutha okubhucabhuca nemithi yemvelo yokuhlanza izandla.
Abanye base-UKZN ababekhona embukisweni bekukhona owayengumfundi wakhona uSesethu ‘Sethu’ Sidzamba, umsunguli weWa Azania Aroma, okuyinkampani yamakha ekhiqiza nedayisa amakha aphambili kepha angabizi no-Itumeleng Masa, owumfundi nomthwebuli ongumnikazi we-Tudups Photography.
Izithombe: ngu-Itumeleng Masa